Isinqumo senkantolo ngoNxamalala – The Ulwazi Programme
Isinqumo senkantolo ngoNxamalala
Izwe liyadunguzela kulezinsuku njengoba kunendaba esematheni nje mayelana nesinqumo esikhishwe inkantolo ephakeme ebizwa ngokuthi i “Constitutional court” mayelana nesinqumo sokubekwa kwecalwa kuphinde kugwetshwe loyo ubengumongameli waseNingizimu Afrika uDokotela Jacob Gedleyihlekise Zuma. Lidunguzela nje izwe, bese kunesikhathi uNxamalala ehamba izinkantolo mayelana namacala ahlukahlukene, kepha ke isinqumo sokuthi agwetshwe sisuka ekutheni wabuye wahosha imfe, wenqaba ukuqhubeka nenkulumo yakhe abeyethula kwi komishana kaHulumeni mayelana nenkohlakalo eyenzakala ezinhlakeni zikaHulumeni. LeKhomishani ibizwa ngokuthi yi “State capture inquiry” okuyilapho okuhlatshwa khona ngemibuzo ababesebenza kuhulumeni mayelana nendaba yenkohlakalo kwiminyango kahulumeni. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka ka-2019 uMsholozi wavela kuyo lekhomishani okuthe ngokuhamba kwesikhathi wahosha imfe wathi akasalubhadi kuyona ngoba enezikhalo ezithize ngayo nangendlela aphethwe ngayo kuyona.
Kuyaqala ngqa emlandweni waseNingizimu Afrika ukuthi kukhishwe isinqumo esikanje sikhishwa yi “Constitutional court” ngoba phela phambilini ababenqaba ukuhambela amakhomishana ahlukene bebehlawuliswa ngemali ngenxa yokuthi banqabe ukuzibandakanya. Kuyaqala futhi nokuthi nasemlandweni waseNingizimu Afrika ukuthi kuthiwe kuzogwetshwa obengumongameli ngoba phela akekho oseke wagwetshwa kwathiwa uzobhadla ejele kusuka kufike intandoyeningi eNingizimu Afrika yingakho nje le kuyindaba ezekwayo impela isematheni kubantu. I-Constitutional court ibe isinika uMsholozi izinsuku eziyisihlanu ukuba aziyele endaweni yokuhlonyeliswa ngezimilo nokuyilapho okumele aqale khona isigwebo sakhe sezinyanga eziyishumi nesihlanu.
Kanti ke abantu abaningi abakubheke ngamehlo abomvu ukuthi yena uNxamalala uzophawula athini ngalesinqumo senkantolo “Constitutional court” ngoba phela ubengakathi mbibi ukuthi aphawule ngalo loludaba. Nayo inhlangano yakhe esiza umphakathi ebizwa ngokuthi “Jacob Zuma Foundation” iphawulile ngalesinqumo senkantolo kodwa alikho elikhiphe ngembaba eliqondile elisho ukuthi ngabe uzosiqala yini isigwebo noma cha ngeke alubhade! Isinqumo senkantolo sihlukanise imbono yabaningi abazi umthetho njengoba kungokokuqala ukuthi kube nesigameko esikanje. Abanye abazi ngomthetho bathi inkantolo igagamelile, ngisho ngabe usephutheni akumele ngabe isigwebo singaphezu kwezinyanga eziyisithupha. Kanti abanye bona bathi akekho umuntu ongaphezu komthetho osekushiwe inkantolo makwenziwe.
Categories News, People Tags Jacob Zuma